मुलुक बनाउनु छ भने च’ट्टान जस्तो भाषण गर्नेलाई हैन, सत्कर्म गर्नेलाई साथ दि’औं। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मुलुक बनाउनु छ भने च’ट्टान जस्तो भाषण गर्नेलाई हैन, सत्कर्म गर्नेलाई साथ दि’औं।
मलाई राजा मन पर्छ म राजा बिरेन्द्र लाई सम्झिन्छु ,तर राजा ज्ञानेद्र लाई हैन ! मलाइ ए’माले मन पर्छ ,म मदन भन्डारी सम्झिन्छु तर केपि ओलि हैन !मलाई का’ङ्ग्रेस मन पर्छ, म बिपि सम्झिन्छु तर शेरे बहादुर लाई हैन !
मलाइ माओबादी मन पर्छ ,म चाइना को मावतसेतुङ सम्झिन्छु तर नेपाल को प्रचण्ड हैन ! मलाइ प्रत्र’कारिता मन पर्छ म रबि लामिछाने सम्झिन्छु ,तर ऋषि धमाला हैन ,हो म त्यस्तो युबा हु जो सहि लाई सहि ,गलत लाई गलत भन्छु।
यदि गलत गलत भन्न सकिन भने ,देश को नागरिक हैन गद्दार हु !त्यसकारण इतिहास पढौ ,बर्तमान बुझौ र भबिस्य स’म्झिउ! देश भाषण र आ’श्वासन ले चल्ने भय खाना न पायर जुम्ला कालिकोट का बच्चा मा कु’पोषण किन लाग्थ्यो !
यदि भाषण र आश्वासन ले देश चल्ने भय दैलेख जाजरकोट मा जनता जीवनजल र सितामोल न पायर किन मर्थे !यदि भाषण र आश्वासन ले देश चल्ने भय तराइमा गरिब जनता चिसो मा ओढ्ने एक कम्मल नपायर सितलहर लागेर किन मर्थे !
त्यसैले बास्तबिता बुझौ देश लाई माया गर्ने भिजनरि ,इमानदार, सक्षम ,देश जनता लागि हरदम तयार च’ट्टान जस्तै भाषण हैन काम गर्ने ब्यक्ती लाई रोजौ !
Previous ज्ञानेन्द्र शाही प’क्राउ परे सँगै सुजन लिम्बुले हेर्नुस् सरकारलाई गरे यस्तो ह’मला!!
Next वि’पतको घडीमा एक अर्कामा ल’ड्ने र लडाउमे काम ब’न्द गर्दै , मानवियता देखाऔं -राजन लम्साल